Miverina ny lanonana… : hanafana ny Le Glacier i Barthelemy Koezy | NewsMada
Miverina ny lanonana… : hanafana ny Le Glacier i Barthelemy Koezy
Raha amin’io herinandro ho avy io vao hiverina amin’ny laoniny ny fampianarana amin’ny toerana maro eto amintsika, tsy toy izany kosa ny eo amin’ny fikarakarana lanonana sy hetsika ara-javakanto samihafa. Raha vao miantomboka ny novambra, rahampitso, toa hisesisesy amin’izay izany rehetra izany rehefa voatery nangina noho ny aretina pesta.
Eo amin’ny tontolon’ny “cabaret”, ohatra, hanafana ny etsy amin’ny Le Glacier, rahampitso alina, i Barthelemy Koezy. Araka ny efa nahafantarana ity mpanakanto ity, hibahan-toerana amin’izao lanonana izao ny mozika mafana. Hetsika heverina fa hiavaka, satria na ny lohateniny aza, mahavariana: « Cabaret Maman’i Kôkôlôsy», araka ny nambaran’ity mpanakanto ity.
Raha ny fanazavany hatrany, hamalifaliana ny mpiala voly, rahampitso hariva, ireo hira rehetra ao anatin’ny rakikira voalohany, navoakany tamin’ny taona 2016, miampy ny vaovao, taty aoriana. Na izany aza, hisy koa ny fihirana sanganasana mpanakanto hafa mba hahatsara kokoa ny korana sy amin’ny maha “cabaret” ny hetsika.
Nasaina manokana, amin’izao seho izao, ny tarika Kaly. Aorian’io, fantatra fa anisan’ny handray anjara amin’ny “festival” iray, hatao any Fenoarivo Atsinanana, i Barthelemy Koezy sy ny ekipany. Miara-dalana amin’izany ny fampahalalana ilay rindran-tsary navoakany farany, mitondra ny lohanteny hoe: «Manal’azy».